Nahomby ny fanentanana ny fiarovana ny aretina tazomoka | Région Boeny
Notontosaina ny 28 Mai 2015 teo anoloan’ny Lapan’ny tanànan’i Mahajanga ny fankalazana ny andro maneran-tany mikasika ny fanentanana ny ady amin’ny aretina tazomoka.
Izany dia nontron’Atoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miomban’antoka iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ary ny reny sy ny zaza, ny OMS, ny Unicef ary ny Usaid izay nisahana ny famatsiam-bola.
Navoitran’izy ireo teto ny tena maha zava-dehibe ny fiarovana sy hisoroana ny aretina tazomoka ary ny tokony hanaovana ny fanentananan bebe kokoa.
Marihina fa ny 26, 27 Mai no efa natomboka tamin’ny alalan’ny atrik’asa ny hetsika hiadivana amin’ny aretina tazomoka niarahan’ireo Talem-paritry ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Prefet ary ny manam-pahaizana manerana an’i Madagasikara tao amin’ny trano fandraisam-bahiny Roches Rouges.
Tanjona tamin’izao andro maneran-tany mikasika ny fanentanana ny ady amin’ny aretina tazomoka izao dia ny fampahafantarana sy fanomezan-danja ny fiaraha-miasa amin’ny mpitondra fanjakana isam-paritra ary ny fampiharana ny politikam-pirenena mba hanamorana ny fifandraisana.
Izany rehetra izany dia nohfanain’ny mpanakanto Herman’s Groupe avy eto antoerana, ireo mpanao dihy oadrah sy ny mpanao tantara an-tsehatra ary ireo mpanenatana ara-pahasalamana.
Ankilan’izay dia nisy ireo trano heva nampiratiana asan’ireo sampandraharahan’ny fahasalamana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Taorian’izay dia nisy ny fitsidihina notanterahin’Atoa Ministra sy ireo delegasiona notarihiny tao amin’ny CHU PZaGa sy CHU Mahavoky Atsimo